China Nnu ngọngọ haịdrọlik pịa Manufacture na Factory | Ekechukwu
ZHENGXI HYDRAULIC pụrụ iche imewe ihe Yz 79 haịdrọlik pịa maka NKANOCBOCROC.
1.Main etiti ihe: jiri nchara # Q345B iji dozie igwe nke igwe karịa ihe nchara # Q235 n'ahịa. Isi ike na-abawanye ugboro 1.5 karịa igwe nkịtị na ahịa.
2.Corrosion nchedo: Tụle corrosive ọdịdị nke nnu, hopper na loading usoro na-mere nke 304 igwe anaghị agba nchara.
3.Automatic nri: Enwere ihe mmetụta na hopper nke usoro nnweta, mgbe enweghị nnu zuru ezu, usoro ahụ ga-amalite ịghasa feeder.
4.Quality njikwa: Ejiri ngwaọrụ mkpuchi mkpu ngwaọrụ ahụ. Mgbe akụrụngwa igwe ahụ gaa na oge akara aka na nrụgide eruteghị, ngwaọrụ ahụ ga-enye mkpu iji chetara onye ọrụ ka ọ lelee njupụta nke ngwaahịa a.
a.Energy ịzọpụta: eji servo moto, mgbapụta, maka haịdrọlik pịa iru ike ịzọpụta iche. Nchekwa ike ruru 40% -70%, chekwaa nnukwu ego na ọnụego ike maka onye zụrụ ya n'ọdịnihu ogologo oge n'iji ya.
b. Nkwụnye nkwụnye nkwụnye nkwụnye ego: Voltage gosiri: Usoro nke atọ 380-480V 50Hz / 60Hz, Oghere ịgbanye volta 323-528V 50Hz / 60Hz. Zuru oke na-arụ ọrụ na mpaghara / ọnọdụ nke na-enweghị ike inye ike.
c.Fast Speed ​​& High Accuracy: nrụgide na-ebuli na 20Mpa oge nzaghachi 50ms, oge enyemaka nsogbu 60ms, ngwa ngwa mmepụta ngwa ngwa na-abawanye gburugburu 10%. Nrụgide nrụgide + -0.5kgf, belata oke ọdịda ọdịda na mmepụta ma melite ogo ngwaahịa.
d. Ogologo iji ndu: Nwayọ oke ọkụ, na-eme mkpọtụ dị ala. Jiri nwayọ kpoo moto na mmanụ ụgbọ ala ogologo oge n'iji ya, kpuchido akụkụ ndị ahụ dị ka akàrà. Mee ka igwe dum jiri ndu.
e.Easy na-ekwusi ike: na-atụle usoro ihe omume usoro ihe omume dị obere ịchọta, na-ekwusi ike nwere ike isiri ndị ahịa ike ka anyị wee dochie kọmputa kọmputa kama PLC nke a na-ejikarị arụ ọrụ na igwe, mee ka onye ahịa nwee ike ịkwado igwe na mpaghara.
6 Nhazi: Ejiri ya na valvụ na-arụ ọrụ na ebe nkesa atọ na-arụ ọrụ, nke zuru oke na mmanụ na capstan maka iwuli elu worktable. 4 ụdị ụdị kọlụm, dị mfe, akụ na ụba na nke bara uru.
7.Safety imewe:Ngwa akụrụngwa nwere ngwaọrụ nwere oke iji gbochie mmebi ahụ. Na photoelectric nchedo na a nchekwa nsu, iji gbochie ihe mberede ọghọm.
a.dring na akwụkwọ ikike ZHENGXI ga-ewere ọrụ zuru oke nke igwe ndị ahịa, akụkụ ọ bụla nwere nsogbu ZHENGXI ga-eziga onye nnọchi ọhụụ ọhụụ maka ndị ahịa, ibu ibu nke nnọchi na-ekpuchikwa ZHENGXI.
b.Site n'ụlọ ruo n'ọnụ ụzọ na-akwụ ụgwọ ma na nhọrọ iji bụrụ maka nrụnye, inye ọrụ, na-akwado, ebumnuche ọzụzụ. A ga-akwụ ụgwọ ọrụ ụlọ n'ụlọ n'ụlọ na ọkwa ọzọ.
Nkwado teknụzụ site na email, ekwentị ma ọ bụ oku vidiyo bụ FREE na ndụ niile dị.
Ọrụ saịtị na-akwụ $ 200 ụgwọ maka ndị ọrụ teknụzụ kwa ụbọchị.
Ọ bụ akụrụngwa akụrụngwa, ngwa ngwa na ibudata. Ejiri igwe akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa, nke nwere ike mepụta oge niile maka awa 24.
Nke a igwe bụ tumadi adabara slat ngọngọ akpụ; akụrụngwa nwere ezigbo nkwụsi ike na oke nkenke, ndụ dị elu na ntụkwasị obi dị elu. Usoro maka ikpo ọkụ na-akpụ ọkụ na-ezute mgbanwe 3 / mmepụta ụbọchị.
Nke gara aga: Automatic Ferrite Magnetik Hydraulic Press
Osote: 4 kọlụm miri ịbịaru haịdrọlik pịa